खेलकुद Archives - Babal Khabar
भिडियो हेर्नुस, इरानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको गोलकिपरमा पुरूष खेलाडी खेलाइएको भन्दै ती खेलाडीको लैंगि'क जाँच गर्न माग गरिएको छ। इरानको राष्ट्रिय फुटबल टिमकी गोलकिपर जोहरेह कोउडेइ पुरुष भएको भन्दै जोर्डनले लैं'गिक जाँचको माग गरेको हो। उज्वेकिस्तानमा सेप्टेम्बर २५ मा भएको खेलमा इरानले जोर्डनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको थियो। इरानकी गोलकिपर जोहरेह कोउडेइले जोर्डनका २ पेनाल्टी बचाएकी थिइन्। जोर्डन फुटबल संघका अध्यक्ष प्रिन्स अली बिन अल हुसैनले इरानले महिला टिममा पुरूष गोलकिपर खेलाएको भन्दै एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग उनको लैं'गि'क अवस्था पुष्टि गर्न माग गरेका हुन्। जोर्डनले यस्तो माग गरेपछि एसियाली फुटबल महासंघका एक प्रवक्ताले यस विषयमा जाँच चलिरहेको बताएका छन्।फिफाका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रिन्स अलीले यदि जोर्डनको आ''रोप सत्य भए निकै गम्भीर मु' भएको प्रतिक्रिय...
पुरा खबर, यसै वर्ष युभेन्टसबाट म्यान्चेस्ट युनाइटेड आएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बुधबारको खेलमा क्लबका लागि महत्वपूर्ण गोल गरे। उनले इन्जुरी समयमा गरेको गोलसँगै युनाइटेडले भिल्लारियललाई २-१ गोल अन्तरले हराउन सफल भयो । यसैबीच रोनाल्डोले प्रेमिका जर्जिना रोद्रिगेजसँग विवाह गर्लान् कि नगर्लान् भनेर कौतुहलता बढेको छ । जर्जिना स्पेनिश मोडेल हुन् । हालै उनलाई रोनाल्डोसँग विहे गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? भनेर सोधिएको थियो । होस् भन्ने चाहन्छु तर यो कुरा ममाथि मात्रै मात्रै भर पर्दैनु, जर्जिनाले हाँस्दै प्रश्नको उत्तर दिएकी थिइन् । यता रोनाल्डोले अहिलेसम्म विवाहको प्रस्ताव गरेका छैनन् । विवाह नभए तापनि दुबैजना म्यान्चेस्टरमा चार सन्तानसँगै खुसीसाथ बसिरहेका छन् । रोनाल्डोका चार सन्तान छन् । जर्जिना छोरी एनालाकी आमा हुन् । क्रिस्टियानो जुनियर उनका जेठा छोरा हुन् । २०१० मा जन्मिएका जुन...
Aug212021 by बबाल खबरNo Comments
मेस्सीले आँसु पुछेको टिस्यु पेपरको मूल्य १० करोड !
एजेन्सी। लियोनल मेस्सी बार्सिलोनाबाट बाहिरिनु एक भावनात्मक क्षण थियो। जब यी अर्जेन्टिनाका सुपरस्टार आफ्नो बिदाइ भाषण दिँदै थिए त्यो बेला उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् । मेस्सी पोडियमको छेउमा उभिएपछि बार्सिलोनाका खेलाडी र सञ्चारकर्मीहरुले ताली बजाए। डेढ मिनेट भन्दा बढी ताली बजेपछि ती खेलाडीले आँसु थाम्न सकेनन्। ३४ वर्षीय मेस्सीले आफ्नो क्यारियरको २१ वर्ष बिताएपछि त्यहाँबाट उनी अलग्गिए। उनले अब आफ्नो नयाँ क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका लागि खेल्नेछन्। मेस्सीको पिएसजीमा स्थानान्तरण भएपछि विश्वभरिका फुटबल प्रशंसकहरूको लागी ठुलो झट्काको रूपमा आएको थियो। उनको बिदाइ भाषणको बखत, जब मेस्सीले आफ्नो आँसु रोक्न सकेनन् उनकी श्रीमती एन्टोनेलाले सो आँसु पुछ्न एक टिस्यु पेपर दिइन । अहिले एक रिपोर्ट बाहिर आएको छ कि लियोनेल मेस्सी एफसी बार्सिलोनामा आफ्नो भावनात्मक बिदाइ भाषणको दौरान आफ्नो आँसु पु...
Aug142021 by EditorNo Comments
एजेन्सी – युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च संस्था यूईएफएले सन् २०२०/२१ को यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । फाइनल खेलेका चेल्सी र म्यानचेस्टर सिटीका खेलाडीले अवार्डको मनोनयनमा दबदबा बनाएका छन् । यूईएफएले शीर्ष १० सँगै उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने शीर्ष ३ खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्दा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले भने स्थान बनाउन सकेनन् । पछिल्लो डेढ दशक च्याम्पियन्स लिग अवार्डमा निरन्तर आफ्नो दबदबा कायम गर्दै आएका रोनाल्डो शीर्ष १० खेलाडीमा पनि अटाउन सकेनन् । गत सिजन युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगमा पोर्टोसँग राउन्ड अफ १६ मा पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो । यूईएफएले मनोनयन गरेको उत्कृष्ट फरवार्डको सुचिमा बायर्न म्युनिखका रोबर्ट लेवान्डोस्की, बोरुसिया डर्टमुन्डका एर्लिङ हालान्ड र पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) का किलियन एमबाप्पे शीर्ष तीनमा छन् । त्यसपछि शीर्ष...
काठमाडौं । पूर्वकप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत खड्काले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरका रुपमा मेरो यात्रा टुंगिएको छ तर नेपाली क्रिकेटका लागि मेरो सपना भने अझै बामे सर्दैछन्, मैदानभित्रका यी दुई दशक जीवन रहुञ्जेल मिठो यादका रुपमा मसँग रहनेछन् । हामी सबैले मिलेर नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छौँ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ उहाँले सन् २००४ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालबाट डेब्यु गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएकाे छ- ‘२००२ मा १५ वर्ष हुँदा मैले सुरु गरेको क्रिकेट यात्रामा साथ, समर्थन, माया र हौसला दिने प्रशिक्षकहरू, साथी खेलाडीहरू, प्रशंसकहरू, सरोकारवालाहरू, मिडियाकर्मी, मेरो परिवार र साथीहरूप्रति म सदैव ऋणी रहनेछु, मैदानभित्रका...
नेपाली लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने क्वारेन्टाइन मुक्त भएसँगै आज आफ्नो नयाँ क्लब होर्वाट हुरिकेन्सबाट मैदान उत्रने भएका छन्। को रोनाको कारण अस्ट्रेलियन घरेलु क्रिकेट लिग बिग बासको प्रारम्भमा अस्ट्रेलिया आउन नपाएका लामिछानेले क्लबका पछिल्ला ६ खेल गुमाएका छन्। तास्मानिया राज्यको होर्वाटमा हुने टिमको सातौं खेलमा आज सन्दीप मैदान उत्रने भएका हुन्। नेपालबाट डिसेम्बर १५ मा अस्ट्रेलिया पुगेका सन्दीपले अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेपछि शुक्रबारदेखि अभ्यासमा सहभागी भएका थिए। होर्वाट हुरिकेन्सको सातौं खेलमा सन्दीपले पुरानो क्लब मेलवर्न स्टार्सविरूद्ध घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल नेपाली समय बिहान ११:५० बजे सुरू हुनेछ। सन्दीपको क्लब अहिले ६ खेलमा चार जितका साथ तेस्रो स्थानमा छ। समान अंक रहेको सिड्नी थन्डर दोस्रो र १६ अंकमा रहेको सीडनी सिक्सर शीर्ष स्थानमा छ। न्दीपको टो...